Ihe kacha mma Lagenaria na nkọwa na foto - Ugu - 2020
Taa, anyị ga-ewebata gị na Lagenariya. N'isiokwu a, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịgụta ihe dị mma banyere lagenariya, ma hụkwa ụdị osisi dị iche iche na foto ahụ.
Osisi Lagenaria bụ nke ezinụlọ Pumpkin, dị ka mkpụrụ nke ọdịbendị na-egosi. Ọ bụ osisi lianoid nke na-eto na ogbe. Lagenariya bụ osisi vaịn na-akpụ akpụ kwa afọ, nke mkpụrụ ya bụ otu ugbo ornamental nke ụdị dị iche iche na nha (elongated, round, pear-shaped, etc.)
Lagenariya "Geese Swans"
"Goose na apụl"
Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị ụdị lagenaria, ị gaghị ekwere anya gị. Mkpụrụ osisi ahụ yiri nkobe nke na-ehulata ala ahịhịa. Egwurugwu na-acha ọcha anaghị acha ọcha ka o yiri nnụnụ dị ndụ site na anya. Mkpụrụ nke lagenarii abụghị nanị ihe eji achọ mma, kama ọ dịkwa mma maka oriri mmadụ. Ya mere, ọ bụghị nanị na ị ga-eju ndị agbata obi gị na ndị ikwu gị anya, ma nweekwa ọhụụ ma ọ bụ ugu pancakes.
Ị ma? A na-eji ogige Lagenaria maka nkata akwa na ngwaahịa dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na mkpụrụ osisi ugu "Goose na apụl" na ịchọrọ ịkụ ya na mpaghara gị, mgbe ahụ, anyị ga-aga nkọwa nkowa. A na-etinye mkpụrụ nke osisi ahụ maka otu ụbọchị n'ime mmiri ma mee ka ọ dị elu na okpomọkụ nke + 22-25 ˚С. A na-ebufe seedlings iji meghee ala na May na June. Okpokoro osisi nwere ike ịbụ ma anyanwụ na nke ndochi anya. Mgbe ị na-akụ ọtụtụ bushes, nọgide na-adị anya nke 40-50 cm nke mere na lagenarii adịghị agwakọta. Lagenaria malitere ịmị mkpụrụ n'ụbọchị 125 mgbe ịgha mkpụrụ.
Ugbu a, ka anyị kwuo banyere peculiarities nke lagenaria iche "Goose na apụl". Ornamental osisi nwere nnukwu mkpụrụ. Site na otu ohia nwere ike na-anakọtara banyere 8-10 pumpkins, nke uka nke nwere ike iru 5-6 n'arọ.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ osisi ndị ruru ogologo 30-35 cm dị mma maka iri nri. A na-ewe ihe ubi na August-September.
Osisi anaghị akpata nsogbu na nlekọta. Lagenariya anaghị achọ ka ọmụmụ na ala na ọkụ. N'okwu a, ịkwanye na mgbakwasa ka echefula.
Ekwesiri iburu n'uche na idebe uzo "Goose na apụl", nke na-enweghị nsogbu na-atọ ụtọ ma ọ bụ vitamin mejupụtara nwere ike ịnọgide ruo mgbe mmiri.
Serpentine Lagenaria adịghị iche na ugu ọ bụla. Ma ọ bụ naanị na ileba anya mbụ. Mgbe ọdịdị nke mkpụrụ, ị ga-aghọta na nke a bụ ezigbo ornamental osisi. Pumpkins nwere oblong udi ma yie elongated zukini. N'otu oge ahụ, ogologo ha nwere ike iru 60-70 cm (mkpụrụ osisi na-achịkọta maka oriri ụmụ mmadụ mgbe ha ruru 50 cm), na ibu ha ruru 7 kilogram. Ọdịiche dị iche iche na-adọrọ mmasị ọ bụghị naanị n'ihi na ọ na-enye mkpụrụ osisi elongated na mkpụrụ osisi dị oke mma, kamakwa n'ihi na ọ nwere ike ịmezi akụkụ ndị mebiri emebi nke ahụ dị n'elu. Osisi ahụ na-eto ruo 2 mita n'ịdị elu, na-achọ ka ìhè (ndo ma ọ bụ ndochi anya anaghị adabara) na mmiri. Enwere ike ịkụ ma n'ala na-emeghe ma na igbe na loggia ma ọ bụ balconies. Na nke mbụ, a na-akụ mkpụrụ ndị ahụ iji nweta mkpụrụ osisi n'April. Mkpụrụ osisi germinate kwesịrị ịdị na okpomọkụ 25-30 ˚C. N'ebe a na-emeghe ma ọ bụ nnukwu ụlọ nwere lagenaria kụrụ na mmalite June.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ala adịghị ekpo ọkụ, mgbe ahụ, mgbe a gafesịrị n'ala ahụ, ala ahụ ga-akwụsị na Lagenaria na osisi ahụ nwere ike ịnwụ.
Na nri, ma mkpụrụ osisi ma epupụta nke serpentine lagenaria na-eji. Anụ nke mkpụrụ osisi ahụ dị ụtọ ma dị nro, yiri zucchini na uto.
Kalama nke Lagenariya nweta aha ya ọ bụghị nanị n'ihi ọdịdị nke mkpụrụ ahụ, kamakwa n'ihi na tupu ya emea ite na efere dị iche iche.
Ekwesiri ighota na enweghi ihe di iche iche dika nri, ebe pulp nwere uto di iche iche, nke obugh madu nile choro. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eche ruo mgbe ugu ahụ zuru oke ma jiri nwayọọ wepụ ihe mkpuchi ahụ, ị ​​ga-enwe nnukwu "karama" nke ị nwere ike itinye na kichin dịka ihe mara mma ma ọ bụ jiri dịka akpa maka mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ.
Ọ dị mkpa! Iji nye ugu ụdị a chọrọ, na nhazi mbụ ọ ga-etinye n'ime oghere osisi.
Lagenaria bushes a dịgasị iche iche nwere ike ibu ibu ruo 3 mita n'ogologo. Mkpụrụ onwe ha nwere ike iru 20-25 cm ke dayameta na ruo 70 cm n'ogologo. Ihe na-adọrọ mmasị nke "iche" dị iche iche bụ na ọ bụrụ na ị bepụ akụkụ nke ugu, ọ ga-anọgide na-eto n'ihu. Ya mere, ị nwere ike ịbịakwute ụdị ọdịdị maka ọdịmma n'ọdịnihu. Mgbe akuku ya bara uru mara na osisi vine a na-eto eto. A na-akụ mkpụrụ na kụrụ n'ime igbe n'April wee debe ya na okpomọkụ adịghị ala karịa 20 Celsius C ruo na njedebe nke May. N'ọnwa June, osisi ahụ na-adaba n'ala na-emeghe ma nye nkwado dị mkpa maka Ome. Iji nweta ezigbo pumpkins maka nkà, ọ ka mma ịkọ lagenariya dị nso ntanye ntanetị ma ọ bụ nkwado na mpaghara buru ibu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwadebe efere gourd kalama, ị ga-anakọta mkpụrụ osisi mgbe ha ruru 40-50 cm n'ogologo. Okwesiri iburu n'uche na pumpkins nwere nnukwu ego nke vitamin C, ya mere, iji ngwaahịa a aba uru karịsịa n'oge oyi.
Ị ma? Ọ bụ mmadụ natara Lagenariya ihe karịrị afọ 3.5,000. Ọtụtụ ebo dị n'Africa ka na-eji mkpụrụ osisi ahụ eme ka e nwee efere, ọkpọkọ, na ngwá egwú.
Calebaha Lagenarius bụ ugu na-acha uhie uhie nke dị ka Bottles Lagenaria. Ọ bụ osisi a dị iche iche nke a na-akụkarị maka ịmepụta ihe dị iche iche na karama dị iche iche. Ọ bụrụ na ọdịdị nke "Ụkwa" nwere nnukwu elu na ala, mgbe ahụ, mkpụrụ osisi pear dịka ọdịdị nke karama anyị na-eji. Na-eto eto a dịgasị iche na nke ndị gara aga. Ebe ọ bụ na osisi nwere akpụ siri ike, ha ga-etinye ya na mmiri tupu akuku. Ọ bụrụ na ị bi na mpaghara ndịda, a ga-ebute ọdịda ozugbo na mbara ala na May (mgbe ala na-ekpo ọkụ ruo okpomọkụ 15˚C). N'elu ugwu dị elu enweghị ike ime na-enweghị usoro mkpụrụ osisi. Osisi ahụ na-emepụta mkpụrụ osisi pear nke nwere ike iru mita abụọ n'ogologo. Otú ọ dị, ọtụtụ ụdị pumpkins dị 40-60 cm. Liana onwe ya, nke nwere nkwado dị mma, na-eru 15 m.
Ọ bara uru na-echeta na ụdị dịgasị iche iche bụ ihe ọkụkụ na mmiri, na oge na-eto eto bụ ihe dị ka 180-200.
Di iche iche Geese-swans lagenaria nwere akuko nke onwe ya, nke na-agwa banyere onyeisi na nwa eze, ndi a zoputara site na mkporo nke ndi ozo. Ná mmegwara, eze ọjọọ ahụ mere nnụnụ ahụ ka ọ bụrụ pumpkins, ma nọgide na-enwe ụdị ha.
Ọtụtụ ndị na-elekọta gardeners na florists na-emegharị ihe dịgasị iche na ụdị "Goose na apụl" n'ihi ọdịdị anya. Otú ọ dị, osisi vaịn ahụ dị iche na ọdịdị nke epupụta, na ogologo nke Ome. Ụdị dị iche iche na-eto n'ogologo ruo 1.5 mita, ọ na-achọ ka ìhè na mmiri (ezigbo ịgbara mmiri ma ọ bụ ebe anwụ na-acha). Oge ahihia nke lagenaria bụ ụbọchị 150-200.
Otu ihe na-adọrọ mmasị nke e guzobere mkpụrụ ahụ bụ na a na-enweta "pumpkins" ndị a na-ekiri na mbara igwe, na ndị na-ejikọta n'elu na-enweta akụkụ elu nke mkpụrụ osisi ahụ.
Ịnwere ike ịkụnye ihe na-eme ka ị banye n'ala na-emeghe, ị ga-etokwa seedlings. Mgbe etolite na mkpụrụ, ọ bụghị ụdị nke dị iche iche ka a na-akpụzi usoro ahụ. Ọ dị mkpa iji mee ka osisi ahụ dịkwuo ala karịa 3-4 cm n'ime ala. Mgbe transplanting bushes n'ogige, dị n'etiti ha na ị chọrọ ịhapụ banyere otu mita nke ohere ohere.
Dive seedlings ke oghe ala mkpa ke mbubreyo May - mmalite June. A na-achịkọta mkpụrụ osisi green na nri na oge ha ruru ogologo 30 cm. Nchịkọta nke pumpkins zuru oke na-eme n'ọnwa October.
Ị ma? Lagenariya nwere aha ndị ọzọ, dịka "kukumba India" na "Vietnamese cucumber", dị ka a kwenyere na osisi a dị na Europe si India na Vietnam.
Nke a bụ ugu elongated nke yiri ụdị "Serpentine" dị iche iche. N'otu oge ahụ, mkpụrụ ha nwere agba dị iche ma dịtụ iche na nha. Cylindrical lagenaria mgbe akuku chọrọ nkwado, nke oke ome (ihe dị ka 15 cm) ga-arapara na ya. Site n'ịgha mkpụrụ kwesịrị ekwesị na nlekọta kwesịrị ekwesị, mkpụrụ osisi pumpkin ruru ogologo mita abụọ.
Uzo yiri nke vineine nke serpentine bu imeghari nke mebiri emebi ma obu bepu uzo nke nkpuru. Ụdị dị iche iche na-achọ ìhè na mmiri. A na-agbatị oge oge ahịhịa na ụbọchị 200.
Ọtụtụ mgbe, a na-eji osisi vaịn mee ihe maka ịkọ ugbo. A na-eji pumpkins emepụta efere na nkà dị iche iche, nakwa maka nri. Mkpụrụ osisi nke ruru 40 cm n'ogologo nwere ike iji chebe, pịkụl, ma ọ bụ mepụta salad.
Ịgha mkpụrụ na seedlings na nlekọta ọzọ dị ka agwọine.
Ihe dịgasị iche iche wee nweta aha ya n'ihi nhazi nke mkpụrụ osisi ahụ, nke dị ka nwanyị a gbanwere agbanwe. Ihe dị iche n'agbata mkpụrụ sitere na mkpụrụ osisi pear na "Botles" bụ akụkụ nke kachasị elu nke mkpụrụ osisi ahụ, nke, ọ bụ ezie na ọ na-eme ka ọrụ nke wepụ ugu pulp, ma ọ ga-ekwe omume ịmepụta akwa ma ọ bụ jug nke ọma site na "nwanyị". Liana nwere ahihia akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nnukwu okooko osisi ọcha, nke si n'ebe dị anya yiri nnukwu mgbịrịgba. Nke a dịgasị iche iche na-adịghị ahụkebe site na nkwenye ma ọ bụ, dị ka ndị ọzọ dị iche iche nke Lagenaria, ọ na-achọ ikpo ọkụ na oge kwesịrị ekwesị.
Mkpụrụ osisi Claviform nwere ogologo site na 25 ruo 200 cm. Nke a dị iche na nha bụ n'ihi ihu igwe na ọmụmụ nke ala. Ihe dịgasị iche iche nwere oge toro eto, nke bụ ụbọchị 160-210, dabere na ikuku ikuku na mpaghara mpaghara ihu igwe. Mkpụrụ nke osisi a na-ejikarị eme ihe maka ebumnuche a chọrọ maka nri.
Ọdịdị dị iche iche nke lagenaria, nke siri ike ịmata ọdịiche dị na "Goose na apụl." Esemokwu ndị dị ịrịba ama dị iche iche na-amụbawanye ọkụ (dịka nke a, na-eto eto nanị site na seedlings) na ihe ndị ọzọ.
Ịmara ọdịiche dị iche iche nwere ike ịdị na "olu" nke mkpụrụ osisi ahụ, nke a na-agbanye ya n'akụkụ, na-eṅomi isi nke cobra. A na-eji ụdị dịgasị iche eme ihe ọ bụghị nanị na nri ma ọ bụ ịmepụta nkà mara mma. Ọdịiche "Cobra" dị iche iche site na ngwọta ya. Site na ugu a, a na-emeso ọrịa nke usoro nsị, tinyere ọrịa nke akụrụ, usoro obi na oke ibu.
Di iche iche nke Polenoid lagenaria na-enwe mgbagwoju anya site na zucchini zuru ezu n'oge mbụ nke mmepe nwa ebu n'afọ. Ugu nke Pollen na-eto oke mkpụrụ osisi nke ruru mita abụọ ma tụọ ruo kilogram 10. O siri ike ikwere na a ga-edebe mkpụrụ osisi ndị dị otú ahụ na-adịghị ike. Otú ọ dị, ugu nke nha a na-etolite na ọnọdụ kachasị mma, nkezi mkpụrụ osisi ahụ ga-adị na 80 - 100 cm.
Osisi ohia di nma nke oma, akwukwo ndi buru ibu, uzo di elu. Osisi ndị ahụ na-acha ọcha, dị ka ụda mgbịrịgba. Ịgha mkpụrụ na seedlings bụ ụdị nke ndị ọzọ iche lagenaria. Otú ọ dị, ọ bara uru na-echeta na mgbe mmiri na-agba mmiri na-emeghe n'ala, ọ dị gị mkpa ịnọgide na-adị n'etiti mkpụrụ (50 cm ke uzo na 70 cm n'etiti ahịrị).
A na-eji ugu eme ihe dị ka ugu maka isi nri, ịkwado ogige ma ọ bụ floristics.
Ọ dị mkpa! Ihe dị iche site na ụdị serpentine na-eme ka mkpụrụ osisi ahụ dịkwuo mma, na ugu n'onwe ya nwere ọnụ ọgụgụ dị elu karịa "Serpentine".
Ugu "turban turban" dị iche iche na iche iche iche ọ bụghị nanị maka ọdịdị na-echefu echefu ya, kamakwa ntakiri.
Ka anyị malite n'eziokwu ahụ na osisi vaịn ọbụna tupu e guzobe mkpụrụ osisi ga-atọ gị ụtọ na okooko osisi odo odo mara mma na nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-agbasa n'akụkụ ogige ahụ, dịka a ga-agbanye ya.
Ugu "Red turban" na-enye nnọọ mmasị talmidnye mkpụrụ osisi ndị dị ka abụọ fused obere pumpkins. A ga-ese akụkụ elu nke mkpụrụ osisi ahụ na agba chaa acha, na ala - agba na-acha ọcha. Ọ bụrụ na ụdị ndị gara aga na-emepụta mkpụrụ osisi buru ibu, mgbe ahụ, obere pumpkins nwere ogologo ruo 30-40 cm toro na Lagenaria "Turban".
Nke a dị ntakiri na-enye ohere iji mkpụrụ osisi ahụ maka imepụta ihe nkwekọrịta dị mma na arịa kichin.
Ọ dị mkpa! Maka akwụkwọ aka, mkpụrụ osisi a mịrị amị na-adịghị ekpughere ntu oyi. Mgbe ịcha, a ghaghị ịgha mkpụrụ ahụ.
Iji mepụta ugbo nke Eastern Turban, ọ dị mkpa ịgha mkpụrụ maka mkpụrụ osisi na ite dị iche iche ruo 10 cm n'April. Na June, a na-ebufe mkpụrụ osisi na mbara ala, na-edebe ihe dịka 30 cm n'etiti osisi.
Obere pumpkins buru ibu na September. Maka oriri, a ga-adọpụ ha na ọkara nke abụọ nke ọnwa August.
Ị ma? Dị ka nnyocha ndị na-adịbeghị anya, lagenaria pulp nwere ihe ndị na-egbochi uto na mmepe nke mkpụrụ ndụ cancer.
Ugu, dabere na ihe dị na mkpụrụ osisi ahụ, nwere ike iji ma maka nri na maka ịmepụta ogige ma ọ bụ ịmepụta ihe ndị na-akpali mmasị. Ugbu a, ị maara ihe ndị bụ isi nke lagenaria nke nwere ike kụrụ n'ubi ahụ na ndị na-atụgharị anya na-atụgharị-site na mkpụrụ osisi ndị dị iche. Ị na-arụ ọrụ n'ụlọ, ọ bụghị naanị na ị ga-akụ osisi n'èzí, kamakwa ị ga-enwe ike iri nri ndị na-atọ ụtọ site na mkpụrụ nke osisi ugbo achọ.